I-china EAA hot melt adhesive film for abakhiqizi be-aluminium nabaphakeli | I-H & H.
Ngephepha noma ngaphandle nge
Indawo yokuncibilika 75-90 ℃
Isikebhe sokusebenza umshini wokucindezela ukushisa: 110-130, 6-30s 0.4Mpa
I-HA490 ingumkhiqizo wezinto zePolyolefin. Futhi le modeli ingachazwa njenge-EAA. Ifilimu eguquguqukayo enephepha elikhishiwe. Imvamisa abantu basebenzisa ububanzi obungu-48cm no-50cm ngosayizi 100 micron esiqandisini.
I-HA490 ilungele ukuhlanganisa izindwangu ezahlukahlukene nezinto zensimbi, ikakhulukazi i-aluminium. Le modeli iyathengiswa kakhulu emakethe yaseBangladesh, ePakistan naseNdiya. Futhi eChina, sibambisana nabakhiqizi abaningi bakagesi abadumile isikhathi eside. Le modeli ine-temprature encibilika kakhulu ezokhipha amandla amaningi okumelana ne-temprature ephezulu.
1. Amandla okunamathela amahle: Ngokuhlangana kwensimbi, iziphatha kahle kakhulu, inamandla okunamathela okunamandla.
2. Okungabuthi futhi okunobungozi kwezemvelo: Ngeke ikhiphe iphunga elibi futhi ngeke ibe namathonya amabi empilweni yabasebenzi.
3. Kulula ukucubungula emishinini nasekulondolozeni izindleko zabasebenzi: Ukucutshungulwa komshini we-lamination okuzenzakalelayo, kusindisa izindleko zabasebenzi.
4. Yiba nokusebenza okuhle ngezinto ze-aluminium: le modeli ifanela ukusetshenziswa kwe-aluminium material composite.
5. Ngephepha lokukhululwa: Ifilimu inephepha eliyisisekelo, elenza uhlelo lokusebenza lube lula ukuthola nokucubungula.
Ifilimu le-HDA490 Hot melt adhesive libizwa nangokuthi ifilimu yokunamathela ye-EAA esetshenziswa kakhulu esiqandisini se-evaporator lamination. Ngokuvamile into yokuvikela ngocwazi iphaneli ye-aluminium ne-aluminium tube. Ngaphandle kwalokho, Ukushintsha ukunamathela kwendabuko kweglue, ukushisa okuncibilikayo kwefilimu okunamathiselwe kuye kwaba ubuciko obukhulu abakhiqizi abaningi be-elekthronikhi abamukelwa iminyaka eminingi. Le modeli iyathengiswa kakhulu eningizimu ye-Asia.
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-EAA lingasetshenziswa nakwezinye izindwangu zokunamathisela nezindwangu.
Langaphambilini I-EVA eshisayo incibilikisa ifilimu yewebhu
Olandelayo: Ifilimu le-PO elishisayo lokunamathisela i-evaporator yesiqandisi
Ifilimu Elinamacala Amabili
I-Hot Melt Adhesive Film Roll
Ifilimu le-Pu Yesigcilikisha
Ifilimu le-Tpu Yesigcilikisha
Ifilimu Elinamathelayo le-Tpu